‘भिलेन’ भर्सेस ‘चौका’ दाउ, एक्सन हेर्ने की कमेडी ? « Ramailo छ
‘भिलेन’ भर्सेस ‘चौका’ दाउ, एक्सन हेर्ने की कमेडी ?
पौष २७ गते, शुक्रबार दुई फिल्म रिलिज भएका छन् । ‘चौका दाउ’ र ‘भिलेन’ एकै मितिमा हलमा लागेको छ । यी दुई फिल्म बारे छोटो चर्चा गरौं ।
पुर्नेन्दु झाले निर्देशन गरेको फिल्म ‘चौका दाउ’मा सामाजिक विकृतीलाई प्रस्तुत गरिएको छ । फिल्ममा विल्सन विक्रम राई, वर्षा राउत, सोनिका केसी, सन्तोष पन्त, तैयाब शाह, रविन्द्र झा, निर्मल शर्मा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा शम्भुजित बास्कोटा र मनोज राजभण्डारीको लगानी रहेको छ भने संगीत र पटक कथा बास्कोटाकै रहेको छ । फिल्मलाई दुर्गा गुरुङ्गको छायांकन गरेका छन् भने सम्पादन मित्र डि गुरुङ्गले गरेका छन् । कोरियोग्राफी बसन्त श्रेष्ठ र भिमफेदी गाइजको रहेको छ । चौका दाउ टिमसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
निखिल उप्रेतीको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘भिलेन’मा तराई प्रदेशको परिवेशलाई चित्रण गरिएकोे छ । फिल्ममा निखिलसंगै शिल्पा पोखरेल, निशा अधिकारी, कपिल खत्रीको मुख्य भूमिका रहेको छ । देबेन्द्र राज पाण्डेको निर्देशन गरेको फिल्मलाई कपिल खत्री र बल बहादुर श्रेष्ठले निर्माण गरेका हुन् । सौरभ लामा र मदन कायस्प घिमिरेको छायांकन रहेको फिल्ममा साहिल खान र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ । बसन्त सापकोटा, लाल कुमार बराल र बाबुल गिरीको संगीत, शुक्र राज शाहको द्वन्द, दिपक श्रेष्ठ र दिपेन्द्र तिमल्सिनाको कोरियोग्राफी रहेको छ । शिल्पासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :